Xiaodan Xi – Pandaily
Xi Xiaodan isafreelance journalist and translator with an anthropology background. She writes about technology and society, and isafan of Scottish literature. You can contact her at [email protected]
Luckin ရဲ့ President ဖြစ်သူ Lu Byung-Spring Company: Shine new စားသောက်ဆိုင်ကို
Luckin Coffee ကို တည္ေထာင္သူ လက္ရွိအမႈေဆာင္ခ်ဳပ္ Lu Byung-Spring (Charles Lu, The Voice) ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းေတြအရ 36kr ဟာ သူ႔အတြက္ စတင္မယ့္ Promotion Projector: Ready Restaurant ျဖစ္ပါတယ္။ Luckin Coffee ဟာ အခုအခါမွာေတာ့ အျငင္းပြားစရာအျဖစ္ကေန ထုတ္ပယ္ခံလုိက္ရပါတယ္။
Industry May 13 မေ 13, 2021
Industry May 02 မေ 2, 2021
Xiaomi ဟာ International Business President Byte CFO မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း
မကြာသေးခင်ကမှ Xiaomi ရဲ့ တစ်ပတ်ရစ်ကင်းဘိုက်ကို ရိုက်နှက်မှုမှာပါဝင်မယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပြီး စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ CFO အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
Industry Mar 25 မတ် 25, 2021